Malunga Nathi- Hangzhou Realy Tech Co., Ltd.
NGOKWENENEineziko lophuhliso elizinikeleyo elinequla elikhulu leenzululwazi ezinamava ezizinikele kuphuhliso lwe-IVD Reagents. Izazinzulu zethu ze-R & D zibandakanyeka kuphuhliso lwenkqubo, ukuphuculwa kwenkqubo, uqulunqo kunye nophuhliso lohlalutyo. Umbhobho wethu wokuphuhlisa imveliso uquka i-chemiluminescence quantitative discovery reagent, i-colloidal gold quantitative reagents, ii-antigens ezahlukeneyo kunye ne-antibodies. Esi sibonelelo samkelwa nguRhulumente woLawulo lokuTya kunye neziyobisi, uRhulumente waseTshayina.
I-RELY ibona ukubaluleka okuphezulu ekugcineni ulawulo oluluqilima lomgangatho, kwinqanaba ngalinye leenkqubo zayo, kunye neemveliso kunye nezenzo zolawulo kuzo zonke izibonelelo zayo nakumbutho wonke. Ukhuseleko lweemveliso zethu luyajongwa, ngovavanyo olubanzi, isampuli kunye neenkqubo zokuqinisekisa, ukuze zihambelane neenkcukacha zokugqibela zemveliso.
Nyaka ngamnye sithatha inxaxheba kwimiboniso yezonyango kumazwe ahlukeneyo afana neMedlab, iMedica kunye ne-AACC njl. Sifumene izatifikethi ze-CE, isiqinisekiso senkqubo yomgangatho we-ISO 13485, iLayisensi yokuVelisa, uGunyaziso lweNtengiso kwilizwe esisuka kulo. Sikwalungiselela i-FDA kunye nezinye izatifikethi ezingaphezulu. Uthungelwano lwentengiso lweReal Tech lugubungele ngaphezu kwamazwe angama-80 kunye nemimandla, inika ithuba elinomdla lokusasazwa kweemveliso ezisemgangathweni ngexabiso elikhuphisana kakhulu. Siphumelele igama elihle kwihlabathi jikelele ngeemveliso zethu ezisemgangathweni kunye neenkonzo zobungcali.
Sizinikezele ekwenzeni ihlabathi libe yindawo engcono ngokubonelela abantu ngeemveliso ezikumgangatho ophezulu kunye neenkonzo.
IHangzhou Realy Tech Co., Ltd.yasekwa ngo-2015. Yinkampani ye-In-Vitro Diagnostic esebenza kwikomkhulu kunye nehlabathi jikelele, ekhethekileyo kwiimvavanyo ze-point-of-care kunye ne-Immunoassay system iminyaka engaphezu kwe-5. Inkampani ihleli kwi-6000 square metre ipaki yesayensi kwaye ixhotyiswe nge-R&D yangoku kunye nezixhobo zokuvelisa.
Imigca yethu yemveliso ebanzi ibandakanya uVavanyo oluKhawulezileyo, uVavanyo lweZiyobisi, i-POCT Readers, kunye nomatshini we-Automatic Chemiluminescence Immunoassay system. Zonke ezi nkqubo ziyahambelana nokuchongwa kweentlobo eziphantse zibe li-150 zeempawu zokhuselo lomzimba, izinto zokuhlola eziquka izifo zentliziyo, izifo ezosulelayo, isifo sokudumba kwesibindi, isifo seswekile, uhlolo lwempilo kunye neSebe lokubeleka kunye nezinye iinkalo. Ayifanelekanga kuphela ukuxilongwa ngokukhawuleza kwezifo ezinzima kwizibhedlele ezinkulu kunye neziphakathi kunye neelebhu, kodwa zifanelekile uhlalutyo olubanzi lwe-immunological quantitative yezibhedlele ezincinci kunye neziphakathi kunye neelebhu.
Inkampani esekwe kukutya kunye nesiqinisekiso solawulo lweziyobisi kwindawo yokusebenzela ecocekileyo kunye neworkshop ephantse ibe ngama-700 ㎡. Imveliso yangoku yemihla ngemihla yeedosi ze-100000, kunye nezixhobo zokuxilonga ze-vitro kunye nomthamo wokuvelisa umatshini wokuvavanya, ukongeza kwimveliso yenkampani yethu, sibonelela ngenkonzo ye-OEM kubathengi, ukutyelela inkqubo, imarike ye-OTC, ubulungiseleli bokhuseleko loluntu kunye amasebe okuthintela ubhubhane abonelela ngeentlobo ngeentlobo zeenkcazo zeemveliso. Imveliso ithengiswa kwiimarike ezikude kwiimarike zasekhaya nezangaphandle.
Inkonzo egqwesileyo kunye nomgangatho othembekileyo usinceda ukuba siphumelele igama lehlabathi jikelele, umzekelo:
1. IKholombiya, iBrazil, iMexico, i-Ecuador, iChile, iPeru...
2. IPoland, iSpain, iFransi, iRashiya…
3. IJapan, iiPhilippines, iMalaysia, iOstreliya…
4. UMzantsi Afrika, iVenezuela, iSomalia, iKazakhstan…
5. Kwaye namanye amazwe
kuya kuthakazelelwa kakhulu ukuba unokuqhagamshelana nathi ngolwazi oluthe kratya malunga nenkampani yethu kunye neemveliso. Wamkelekile ukusebenzisana nathi nge-OEM.